Manchester City Oo La Wareegeysa Labo Daafac Midig Oo Uu Ka Mid Ah Yahay Dani Alves - Laacib.net
Manchester City Oo La Wareegeysa Labo Daafac Midig Oo Uu Ka Mid Ah Yahay Dani Alves
Tababare Pep Guardiola ayaa doonaya inuu kula midoobo daafaca midig Dani Alves kooxda Manchester City, lakiin macalinka Man City ayaa sidoo kale doonaya inuu la soo wareego daafac midig kale Kyle Walker, sida ay qortay wargeyska The Sun.
Guardiola, oo waqti guulo ah la soo qaatay xiddiga Juventus Alves oo 34 sanno jir ah markii ay wada joogeen Barcelona ayaa doonaya inuu khibrad ku soo kordhiyo qolkiisa labiska.
Labada nin ayaa ku soo wada guuleystay lix koob oo horyaalka La Liga ah iyo seddex Champions League mudadii ay wada joogeen Camp Nou. Alves ayaa finalka Champions League la gaaray Juventus xilli ciyaareedkii la soo dhaafay laakiin waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu xagaagan isaga tago Juve.
Tottenham iyo Chelsea ayaa sidoo kale qiimeynaya xaalada xiddiga reer Brazil.
Alves oo ay sannad kaga harsan tahay qandaraaskiisa Juve ayaa loo arkaa xiddig muhim u ah dib u dhiska uu Guardiola ku sameynayo Etihad Stadium laakiin si la mid ah daafaca midig ee Tottenham Walker.
Daafaca England oo 27 sanno jir ah ayaa soo bandhigay inuu boosas badan ka ciyaari karo isagoo garabka bidix u dheelay xulka England kulankii France ee isbuucii la soo dhaafay.
Benjamin Mendy oo daafaca bidix uga dheela Monaco ayaa isna la filayaa inuu yimaado Manchester City, iyadoo seddex ciyaaryahan ay buuxin doonaan boosaskii ay baneeyeen Pablo Zabaleta, Gael Clichy iyo Bacary Sagna, kuwaasoo si xor ah uga tagay kooxda.